ဘောလုံးပွဲကြည့်နေသည် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Entertainment, individualism, Internet, old flames. Bookmark the permalink.
← ပြန်ပါဦးမယ် ပြန်ဦးမယ်
2 thoughts on “ဘောလုံးပွဲကြည့်နေသည်”
kom | June 26, 2010 at 12:54 am
အဲဒီလင့်ကလေးကို ကလစ်ရကော်းနိးမကောင်းနို့. ……..း
kom | June 26, 2010 at 1:02 am